Fomba tsara indrindra mivezivezy ao Amsterdam mankany Berlin By Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Fomba tsara indrindra mivezivezy ao Amsterdam mankany Berlin By Train
(Last Nohavaozina: 15/05/2020)
Ny fitsangatsanganana ao Amsterdam ho any Berlin amin'ny lamasinina dia manolotra traikefa tsy azo hadino sy tsy misy safidy tsara indrindra amin'ny mpandala ny tontolo iainana. Na dia ny adiny enina miverina dia somary miadana, ny fampiononana natolotry ny fiaran-dalamby sy ny hatsarany ny ny diany dia miavaka. miaraka tsara tarehy toerana manodidina teny an-dalana, ary ny fisakafoana fiara mba hanampy nitranga ny fotoana, ilay dia mifarana ny tsara lavitra kokoa noho ny nantenaina. Ity no fiaran-dalamby in Europe manolotra ho an'ity lalana.
Tonga tao amin'ny maoderina Hauptbahnhof (HbF) rehefa mandeha avy any Amsterdam mankany Berlin na Berlin mankany Amsterdam ianao amin'ny lamasinina, sarotra tsy mba faly ilay dia izay miandry. Ny gara dia rafitra vy amin'ny rihana maro, fiarandalamby izay miampita ambony lohanao ny mihantona amin'ny alalan'ny lalamby. Tena tsara mifandray ny sisa tamin'ny tanàna amin'ny alalan'ny tsipika sy ny metro fiara fitateram-bahoaka peo, tao afovoan'i Berlin. Raha toa ka tsy namandrika zavatra ilaina ao Berlin, safidy tsara iray minitra fotsiny hiala amin'ny gara no InterCity Hotel.
Rehefa miala any Amsterdam mankany Berlin ianao amin'ny lamasinina, tonga any amin'ny malaza Central Station any Amsterdam, iray amin'ireo trano emblematic indrindra tao an-tanàna, ary koa ny seranam-piaramanidina ny Schipol. mora idirana, ny Central Station naorina in 1889, ary amin'izao fotoana izao dia mandray ny 250,000 mpandeha isan'andro. Ny gara dia tsara signposted. Raha tsy miteny Anarana iombonana, tsarovy fotsiny fa ny anaran'ny sehatra no “lalana”. Raha ilaina, dia afaka resaka ny sasany teny anglisy, satria ny tehina amin'ny gara miteny ny fiteny. in Amsterdam, safidy tsara ny zavatra ilaina akaikin'ny fiantsonana foibe dia ny Ibis Style. Ery, ny toerana tanteraka satria ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby mahitsy eo afovoany, manakaiky ny toerana mahaliana.
Ny serivisy fiaran-dalamben'i Amsterdam mankany Berlin amin'ny lamasinina dia matetika matetika, ary misy tokony ho ora roa isan-fiarandalamby. Ny ankamaroan'ny andro fiarandalamby iray tena ahazoana aina manolotra asa fanompoana, fa somary miadana, raha mijanona ao amin'ny tanàna maro teny an-dalana. Voalohany fiaran-dalamby avy any Amsterdam ho any Berlin miainga amin'ny 6:58 aho, tonga tao an-drenivohitra alemà amin'ny 13:20. Avy Berlin ho any Amsterdam, ny voalohany miainga amin'ny fiaran-dalamby 06:37 ary tonga amin'ny 13:08. Ny ampahany tsara indrindra ilay dia nandritra ny andro, Tsy isalasalana, dia ny endriky ny. Tanàna kely ao amin'ny afovoan-tany Alemaina sy Holandy, ary koa ny tendrombohitra sy ny endriky ny any ambanivohitra, dia tena mahatalanjona!
Amsterdam mankany Brussels tapakila fiaran-dalamby
Ny seza safidy eo amin'ny fiaran-dalamby avy any Amsterdam ho any Berlin dia samihafa. Tandavan ireo avy amin'ny toerana mahazatra ny rivotra-miankina cabins izay manana seza sasatra, ary na dia niova ho fandriana. Koa satria ilay dia mahari, mandeha amin'ny anankiray amin'ireo cabins, izay manome Extras toy ny mazava, fanaraha-maso sy ny mari-pana plugs ho an'ny solosaina sy ny finday, izay mahatonga izany azo atao ny mijery sarimihetsika ao amin'ny fampiononana ny efitra nandritra ny diany rehetra. Tsarovy mba hividy ny tapakila, fara fahakeliny, tapa-bolana mialoha mba ho azo antoka tsy misy olana mitranga.
Indrindra isika antoka fa tena ho fatratra ny diany avy any Amsterdam ho any Berlin, sy ny mifamadika amin'izany. Eny, hisy iray hafa, satria nandeha Rehefa miezaka izany ny voalohany, foana ianao te-haka indray ny fiaran-dalamby ary hankafy tanteraka ny dia.
Noho izany, ve ianao vonona ny fiaran-dalamby Tsidika teo anelanelan'i Holandy sy Alemana tamin'ny lamasinina? raha toa ka ampirimo hiaraka aminay ny tapakilan'ny lamasininao 3 minitra, amin'ny taha sy mora indrindra nesorina ny saram isalasalana famandrihana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Famsterdam-berlin-train%2F%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / de ny / nl na / fiteny azy sy ny maro hafa.